गृह मन्त्रालयले गर्यो एकाएक सबै सवारी पास खारेज ! – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /समाचार/गृह मन्त्रालयले गर्यो एकाएक सबै सवारी पास खारेज !
गृह मन्त्रालयले गर्यो एकाएक सबै सवारी पास खारेज !
१ असार, काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले निजी सवारी साधनलाई दिएको सबै सवारी पास खारेज गरेको छ । लकडाउन खुकुलो बनाएर जोर विजोर प्रणालीमा निजी सवारी सञ्चालन गर्न दिएसँगै सबै पास खारेज गरिएको हो । पासले जोर विजोर प्रणाली कार्यान्वयनमा समेत अ’प्ठ्यारो भएकाले खारेज गरिएको गृह मन्त्रालयका सहप्रवक्ता उमाकान्त अधिकारीले जानकारी दिए ।
जडिबुटीमामा कारले स्कुटरलाई ठ’क्कर दिँदा २७ वर्षीया सुप्रभाको मृ’त्यु